योनीको आकारले यौनसन्तुष्टिमा फरक पार्छ या पार्दैन ? | योनीको आकारले यौनसन्तुष्टिमा फरक पार्छ या पार्दैन ? |
योनीको आकारले यौनसन्तुष्टिमा फरक पार्छ या पार्दैन ?
उज्यालो प्रतिनिधि ४ मंसिर २०७७, बिहीबार स्वास्थ्य/जीवनशैली
काठमाडौँ । व्यक्तिपिच्छे मानिसको अनुहार आकारप्रकार फरक फरक हुने गर्छ । सबै मानिसहरुको आकारप्रकार र रुप एकै हुने गर्दैन । ठीक यही कुरा योनी अर्थात् महिलाका प्रजनन अंगको मुख्य भागको हकमा पनि लागू हुन्छ ।
महिलाको योनीको आकारले के फरक पर्छ रु यो युगौंदेखि उठ्दै आएको प्रश्न हो । यो प्रश्नबारे बढी चासो राख्नेहरुमा पुरुष रहने गर्छन् तर स्वयं महिलाको हकमा पनि यो कुरा कम चासोको विषय चाहिँ होइन ।
‘‘योनी अत्यन्तै लचिलो, इलास्टिक जस्तो खुम्चने र तन्कने क्षमता भएको अंग हो’’, बाल्टिमोरस्थित मर्सी मेडिकल सेन्टरका एडोल्सेन्ट गाइनोकोलोजी एण्ड वेल वुमेन केयरका डाइरेक्टर क्रिश्टाइन ओ कोनोर भन्छन् । यो आफ्नो ठाउँमा टेम्पोन ९महिनावारी भएको बेला रगत सोस्न योनीभित्र राखिने रुवा वा कपडाको सामान, जुन भिजेपछि फैलिने गर्छ र रगतलाई चुहिन दिँदैन० लाई अड्याएर राख्न सक्ने गरी सानो हुन सक्छ भने एउटा सिंगो बच्चालाई त्यसबाट पार गराउन सक्ने गरी फैलिन सक्ने पनि हुन्छ । यस्तो किन हुन्छ भने योनीका भित्री भित्ताहरु हाम्रा आमाशयसँग मिल्दोजुल्दो हुन्छ, त्यो प्रयोग नहुँदा एकअर्कामाथि खप्टिएर पत्रपत्र बनेर बसेको हुन्छ, जुन आवश्यक पर्दा फैलिन सक्छ ।
यो पनि पढ्नुहोस् ... किन ओछ्यानमा खाना खानु हुँदैन ?
महिलाको योनीको आकारलाई नाप्ने काम सामान्यतः सबैभन्दा पहिले सन् १९६० को दशकमा मास्टर एण्ड जोनसनले गरेको कार्यबाट थालनी भएको पाइन्छ । उनीहरुले कहिल्यै गर्भवती नभएका १०० महिलाहरुमाथि परीक्षण गरेर हेर्दा सामान्य अवस्थामा महिलाहरुको योनी २।७५ इन्चदेखि ३।२ इन्चसम्म हुने गरेको पाएका थिए । तर तिनै महिलाहरु कामोत्तेजित हुँदा त्यो बढेर ४।२५ देखि ४।७५ इन्चसम्म भएको पाएका थिए । तर योनी कत्रो छ भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यौनक्रियामा योनीको बाहिरी एक तिहाई हिस्साले मात्रै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने मानिएको छ ।
टार्नेका अनुसार, उनले महिलाहरुमा पाएको मुख्य समस्या भनेको यौनक्रियाका दौरानमा महसूस गर्ने असहजतापन नै हो । यो त्यस्तो बेलामा विशेष गरेर हुने गर्छ जब महिलाको योनी छोटो हुन्छ, कसिलो हुन्छ वा मुख्यतः बच्चा जन्माएपछि उनीहरुको अंग ९पाठेघर, ब्लाडर वा अरु भित्री अंगहरु० खसेको हुन्छ । उनका अनुसार, “अंग खसेको अवस्थामा बाहेक, योनीको लम्बाईले यौन सन्तुष्टिमा कुनै असर पार्दैन ।”
यो पनि पढ्नुहोस् ... भविष्यमा कोरोनाभाइरसको कहर थप भयावह हुनसक्ने चेतावनी
यो पनि पढ्नुहोस् ... जर्मनीमा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप मानिसमा परीक्षण थालियो
केले चाहिँ असर गर्छ ?
“योनीको आकारप्रकार अनि समयक्रममा यो परिवर्तन हुन्छ, हुँदैन भन्ने कुराबारे चिन्ता लिनु वास्तवमै गलत हो”, ओ कोनोर भन्छन् । उनका अनुसार, ूयोनीको आकार प्रकारभन्दा पनि त्यस क्षेत्रमा आउने स्राव, जागृत हुने यौन उत्तेजना र आफ्ना पार्टनरसँगको राम्रो सम्बन्धले महिलाको यौनआनन्दमा ठूलो भूमिका खेल्ने गर्छ । ू